DAHALO TAO AMBOHIMAHASOA : Olona telo maty, sarona ny basy vita gasy fampiasan’ny jiolahy
Mahery vaika ny asan-dahalo tany amin’ny Distrikan’Ambohimahasoa iny hatramin’ny faramparan’ny herinandro lasa teo. 19 juin 2019
Tsy milavo lefona amin’izany anefa ny fokonolona sy ireo zandary mpampandry tany fa mitohy ny fiambenana ny tanàna ary nahavelombolo ny mponina ny nahalavo ireo olon-dratsy izay tompon’antoka tamin’ny fanafihana mahery vaika. Ny zoma alina hifoha sabotsy, andian-dahalo marobe nirongo fitaovam-piadiana no nigadona tao an-tanàna, tafavoakan ’izy ireo ny omby, ka tompon’omby iray no maty tamin’izany raha toa ka saika handeha hanohitra azy ireo.
Tafatsoaka ireto farany nony avy eo. Rehefa nahazo loharanom-baovao mahakasika ny zava-nitranga ny zandary misahana ny fandriam-pahalemana ao an- toerana dia niroso tamin’ny fanatanterahana ny fanarahan-dia. Rehefa nifanojo ny lalan’ireto mpanara-dia sy ny dahalo ny sabotsy lasa teo dia maty voatifitra ny jiolahy roa ka sarona tamin’izay ihany koa ny basy vita gasy fampiasany. Manamafy hatrany moa ny eo anivon’ny zandary fa tanjon’izy ireo ny hiaro ny vahoaka sy ny fananany. Miantso fiaraha-miasa amin’ny fokonolona rahateo koa mba hanamorana amin’ny famongorana ireo olon-dratsy.